ProofHQ: Hubinta khadka tooska ah iyo otomaatiga shaqada ee loo yaqaan 'Workflow Automation | Martech Zone
ProofHQ: Hubinta khadka tooska ah iyo otomaatiga shaqada
Jimco, Abriil 17, 2015 Monday, May 4, 2015 Douglas Karr
CaddayntaHQ waa barnaamij lagu cadeeyo SaaS oo ah softiweerka cadeynta tooska ah ee tooska ufiirinaya dib u eegista iyo ansixinta waxa ku jira iyo hantida hal abuurka leh si mashaariicda suuq geynta loo dhameystiro si deg deg ah oo dadaal yar. Waxay beddeleysaa emaylka iyo nuqullada nuqullada adag, iyadoo siineysa kooxaha dib-u-eegista qalab ay si wada-jir ah dib ugu eegaan nuxurka hal-abuurka, iyo qalabka maareeyayaasha mashruuca suuq-geynta si ay ula socdaan dib-u-eegista socota. ProofHQ waxaa loo isticmaali karaa dhammaan warbaahinta oo ay ku jiraan daabacaadda, dhijitaalka iyo maqalka / muuqaalka.
Caadi ahaan, hantida hal-abuurka ah ayaa dib loo eegaa oo loo ansixiyaa iyadoo la adeegsanayo emayllada, caddaymaha nuqul-adag, wadaagga shaashadda iyo dhowr waxyaalood oo kale oo qaldan, oo aan waxtar lahayn. CaddayntaHQ wuxuu xalliyaa dhibaatadan iyadoo la siinayo xal daruur ku saleysan oo loogu talagalay kooxaha suuq-geynta si aan kaliya dib-u-eegis loogu sameyn, wax looga beddelin loona kaashaan hantida hal-abuurka ah laakiin sidoo kale loo helo shakhsiyaadka saxda ah iyo kooxaha ansixiya hanti kasta ka hor inta aysan u gudbin wajiga xiga, taas oo ah waxa u gaarka ah ProofHQ shaqaynta is-beddelka ah sameeyo.
Maareynta Hawsha: Dib-u-eegis si habboon loo hagaajiyay oo otomaatig ah iyo oggolaansho shaqo oo loogu talagalay hantidaada hal-abuurka ah ayaa muhiim u ah hubinta mashaariicda suuq-geynta iyo waxyaabaha kale ee la keenayo lagu dhammaystiro waqtigooda. Haddii aad tahay hay'ad u leh hawlo shaqo oo kala duwan macmiil kasta ama summad la kulanto ciriiriga gudaha iyo arrimaha u hoggaansanaanta, waxaad si joogto ah waqti ugu lumineysaa taas oo lagama maarmaan u ah hal la'aan. Iyada oo la adeegsanayo aalad otomaatig ah, agaasimayaal hal abuur leh, maareeyayaasha mashruuca ama suuqleyda maareynaya koox ayaa ku dhejin kara dib-u-eegis soo noqnoqda iyo howlaha oggolaanshaha gawaarida, taas oo kuu oggolaaneysa inaad diirada saarto sameynta waxa ugu wanaagsan ee aad sameyso: inaad noqoto mid wax soo saar badan oo hal abuur leh.
Astaamaha Muhiimka ah ee ProofHQ
Habka dib u eegista iyo ansixinta fudud
Waqti-dhab ah, faallooyin macquul ah iyo qalab calaamadeyn
Ka abuur cadeymo noocyada feylka + 150 +
Isdhexgalka Mashruuca Maareynta iyo qalabka DAM sida BaseCamp, Central Desktop, CtrlReviewHQ, Adobe Creative Suite, Microsoft Sharepoint, Xinet, Box, Widen iyo Workfront
Dib ugu eeg caddeynta kombuyutarka, MAC, taleefanka casriga ah ama kaniiniga
Is-barbardhig noocyo badan
Si dhakhso leh ula wadaag caddaymaha kooxaha dib-u-eegista ee loo qaybiyay
Lasoco cadeymaha ka soo horjeeda waqtiyada kama dambaysta ah
Qulqulka shaqada iswada
Maareynta caddeynta tooska ah
Tags: adobe suite hal abuur lehhay'addaqalabka wakaaladaogolaanshahaBasecampBoxMiiska DhexeiskaashiCtrlReviewHQdesignMicrosoft Sharepointcadeynta internetkacaddaynproofqcaddeynkooxdafidinXinet
Sida loo Dhiso loona raad raaco Kobcintaada Instagram ama Ololahaaga
Adigu Mahelaysid Hadalka Gigs Sababtoo ah Joogitaankaaga internetka
Jun 24, 2013 at 7: 04 PM
ProofHQ waa bilow wanaagsan, laakiin macaamiisha aad u horumarsan, fadlan fiiri Viki Solutions. Iyada oo 2400% qotodheer qoto dheer, saxnaanta midabka, dib u eegista isbarbardhiga, baakadaha astaamo gaar ah, iyo tikniyoolajiyad dhaqso leh, wareejin feyl sugan iyo wadaagid caalami ah, Viki Solutions waxay qancisaa baahiyaha wakaaladaha maareynta calaamadaha waaweyn ee adduunka. Waxaan jeclaan lahayn inaan adigana qayb uga noqono adiguba! Waan ogahay inay tani tahay boosteejo shirkadeed, laakiin waxaan kaliya isku dayayaa inaan ka caawiyo akhristayaashaada inay helaan waxa ay raadinayaan.
Jul 6, 2013 markay ahayd 5:15 AM
Waxaan u adeegsanaa Proofhub (www.proofhub.com) waxaanan helnay aaladda wax lagu caddeeyo oo lagu daray mashruuca iyo liistada shaqooyinka moodalada ee kafiican basehamp's proofhq. Kooxda naqshadeeyayaasha runti way jawaab celiyaan oo dhageystaan ​​macaamiishooda, taasi waxay noo aheyd wax weyn oo lagu daray.
Jan 23, 2014 at 8: 09 AM
ProofHQ waa ikhtiyaar wanaagsan laakiin waxaan jeclahay ProofHub inbadan maxaa yeelay waa mid aad u awood badan oo fudud sidoo kalena leh astaamo badan.